अब यी १० कम्पनीको शेयर सस्तोमा, जानौ कसरी लगानी गर्ने? - E-BreakingNews
Home Karobar अब यी १० कम्पनीको शेयर सस्तोमा, जानौ कसरी लगानी गर्ने?
अब यी १० कम्पनीको शेयर सस्तोमा, जानौ कसरी लगानी गर्ने?
आज हामीले श्रावण १६ गते अनुसार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचिकृत भएका कम्पनीहरुमध्ये सवै भन्दा सस्ता भाउ भएको १० कम्पनीहरु छनौटमा लिएका छौं ।
यी कम्पनीमा लगानीकर्ताले भविस्यका दिनहरुमा राम्रो मुनाफा कमाउन सक्नेछन । बस केहि समय मात्र लगानीकर्तामा धैयरताको आवश्यक छ । हजुरहरु संग भएको केही पुँजीले न्यूनतम मूल्यमा शेयर खरिद गर्न सक्नुहुनेछ । त्यसले तपाईलाई एकदमै राम्रो मुनाफाको अवसर दिनेछ । आहिले समय सानो रकमले धेरै कित्ता शेयर किन्ने अवसर हो ।
अहिलको समय, परिस्थिति र होहल्लाले दोस्रो बजारमा धेरै कम्पनीको शेयर मूल्य प्राइमरी शेयर अर्थात आइपिओको मूल्य भन्दा कममा आएकोछ । यस्तो हुनाले जो सँग शेयर छ, उसलाई पक्कै घाटा छ । तर, अहिले किन्ने शेयरधनीले दीर्घकालमा राम्रो फाइदा लिन सक्नेछन् । यस्तो बेलामा सस्तो कम्पनीको शेयर किनेमा आज र भोलीमा त भन्न सकिन्न पर्सिका दिनमा भने पक्कै लगानीकर्ता मालामाल बन्ने छन् ।
भन्ने गर्छन नि मौका आउछ पर्खिदैना बगेको खोला फर्किदैन । अहिले दोस्रो बजार मा प्रतिकित्ता ५० रुपैयाँ भन्दा पनि कम मूल्यमा शेयर पाउन सकिन्छ । यति न्यून र सस्तो मूल्यमा शेयर पाउनु भनेको तपाई हाम्रो लागि एकदमै सुनौलो अवसर हो । यस्तो समयलाइ गुमाउनु हुँदैन, तपाईसँग अहिले जगेडा पैसा छ ? थोरैमा धेरै नाफा कमाउने अवसर पनि यही हो ।
शेयर बजारको विशेषता भनेको शेयर मूल्य घटबढ हुनु हो । त्यसमा पनि लगानीकर्ताको धैयरता भनेको त एकदमै उत्तम पक्ष हो । किन भने शेयर बजारमा जो संग धैयरता गर्न सक्ने क्षमता छ उसैले मुनाफा गोजीमा हाल्न सक्छ ।
यी हुन् ति १० सस्ता कम्पनिहरु
यो पनि, ५ ओटा कम्पनीको ४ करोड ५० लाख कित्ता शेयर सूचीकृत नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा पाँच ओटा कम्पनीको ४ करोड ५० लाख १४ हजार ६८५ दशमलव ७४ कित्ता शेयर सूचीकृत भएको छ । पाँच ओटा कम्पनीको बोनस शेयर आईपीओ सूचीकृत भएको हो ।
यस साता नेप्सेमा सूचिकृत भएको शेयर विवरण तल उल्लेख गरिएको छ ।
सिटीजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड : सहयोगि विकास बैंकलाई प्राप्ति गरेपश्चातको ४६ लाख ७६ हजार २०५ दशमलव ७४ कित्ता शेयर
अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड : १ करोड कित्ता साधारण शेयर (आइपिओ)
महुली सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड: २ लाख ४ हजार कित्ता बोनस शेयर
आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड : आरम्भ लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र चौतारी
लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड : एकआपसमा १:१ को अनुपातमा गाभिँदा कायम हुन आएको प्रति शेयर १०० रूपैयाँ अंकित दरको २६ लाख ३४ हजार ४ सय ८० कित्ता शेयर
मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड : गण्डकी विकास बैंकलाई प्राप्ति गर्दा कायम हुन आएको २ करोड ७५ लाख कित्ता शेयर, रासस